कति बलियो छ अमेरिकासँग बदला लिने घोषणा गरेको इरानी सेना ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कति बलियो छ अमेरिकासँग बदला लिने घोषणा गरेको इरानी सेना ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २० पुष आईतवार १९:२४
अमेरिकाले आफ्ना एक महत्त्वपूर्ण सैन्य नेतालाई मारिदिएपछि इरानले त्यसको प्रतिशोध लिने उद्घोष गरेको छ। इरानी कूड्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानीको गत हप्ता छिमेकी इराकको राजधानीमा विमानस्थलबाहिर अमेरिकी आक्रमणमा परेर मृत्यु भयो।
त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै इरानका सर्वोच्च नेता आयतूला अली खामनेईले उक्त आक्रमणमा संलग्न पक्षसँग “गम्भीर प्रतिशोध” लिइने वाचा गरेका छन्।
अमेरिकालाई चुनौती दिने इरानको सैन्य क्षमता कस्तो छ? हामी यहाँ इरानी सेनाको परम्परागत र गैरपरम्परागत शक्तिबारे के थाहा छ त्यसबारे केही खोतल्दैछौँ।
इरानमा पाँच लाख २३ हजार सक्रिय सैन्य सेवामा भएको अनुमान गरिएको यूकेस्थित इन्टर्न्याश्नल इन्स्टिट्यूट फोर स्ट्रटीजिक स्टडीजले जनाएको छ।
उक्त सङ्ख्यामा इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) का कम्तीमा डेढ लाख जवान सम्मिलित छन्।
आईआरजीसीको जलसेनामा थप २०,००० सैनिक छन्। जलसेनाले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने जलक्षेत्रमा गस्ती गर्छ। गत वर्ष त्यहाँ तेल बोक्ने विदेशी ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई इरानी पक्षले कारबाही गर्दा तनाव उत्पन्न भएको थियो।
आईआरजीसीअन्तर्गत रहेको विशेष सैन्य बल ‘कूड्स फोर्स’ले विदेशमा गोप्य गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
झन्डै ५,००० जना भएको कूड्स फोर्स जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा थियो। त्यसले इरानका सर्वोच्च नेताबाट सोझै निर्देशन लिने गरेको छ।
ती सङ्गठनमा लेबननको हेज्बूला आन्दोलन र प्यालिस्टिनीअन इस्लामिक जिहाद छन्।
तर आर्थिक सङ्कट र नाकाबन्दीका कारण इरानको हतियार आयात प्रभावित भएको छ। उक्त क्षेत्रमा इरानको हतियार आयात अरू देशको तुलनामा सानै छ।
गत वर्ष मे महिनामा इरानसँग तनाव बढेपछि अमेरिकाले मध्यपूर्वमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोध गर्ने क्षमा भएको पेट्रिओट एन्टी-मिसाइल डिफेन्स सिस्टम पठाएको थियो।
उक्त प्रणालीले बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र, क्रूज क्षेप्यास्त्र र विकसित विमानलाई निष्क्रिय बनाइदिन सक्छ।
आफूले विकसित गरेको ड्रोन प्रविधि आफ्ना क्षेत्रीय साझेदार वा समर्थकलाई उपलब्ध गराउन वा बेच्न इरान तत्पर देखिएको बीसीसीका रक्षा तथा कूटनीतिक संवाददाता जोनाथन मार्कस बताउँछन्। गत वर्ष साउदी अरबमा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेर दुईवटा तेलखानीमा क्षति पुर्‍याइएको थियो।
त्यति बेला अमेरिका र साउदी अरब दुवैले ती घटनामा इरान संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए। तर इरानले त्यसको खण्डन गर्दै यमनी विद्रोहीले दाबी गरेअनुसार उनीहरू नै संलग्न भएको बताएको थियो।
सन् २०२० आफ्ना पारमाणविक केन्द्रहरूमा भएको एउटा ठूलो साइबर आक्रमणपछि इरानले आफ्नो साइबर क्षमता सुदृढ बनायो। आईआरजीसीअन्तर्गत एउटा छुट्टै साइबर एकाइ भएको र त्यसले व्यापारिक र सैन्य जासुसी गर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ।
रीयालिटी चेक टी‍म